China YF-T15 famirapiratan-tsolika avo lenta-fitaratra mpamorona zava-poana sy mpamatsy | Yifan
YF-T15 fitaratra avo lenta Fitaratry ny zava-poana
Ity latabatra fiakanjoana ity dia mety amin'ny fitehirizana ny entanao manokana. Ho mora kokoa ny miomana amin'ny maraina miaraka amin'izy ireo aseho eo alohanao rehetra. Ampiasao ny vatasarihana sy ny latabatra ambony latabatra hamaly ny filanao rehetra. Fanaka mirentirenty ho an'ny efitranonao.
TOETOETRA Fitehirizana, vatasarihana, fitaratra ambony
STYLE Manan-karena sy maoderina
KEVITRA ambony gloss MDF birao + volamena nopetahany takela-by
DIMENSION TABLE 800mmL x400mmW x750mmH
1000mmL x400mmW x750mmH
1200mmL x400mmW x750mmH
manohana ny OEM amin'ny habeny izahay
MIRROR tafiditra ENY
Warranty 3 Taona voafetra (fonenana), 1 taona voafetra (ara-barotra)
Vidiny EXW: US $ 0,5 - 9,999 / Piece (miresaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa)
Min.Order Order: 30Pieces
Fepetra fandoavana: T / T
Ny endriny kely indrindra amin'ny tsipika mahitsy sy ny zoro mazava dia ahitana vatasarihana sy kabinetra amin'ny lafiny fitehirizana ireo zavatra ilaina amin'ny faritra iasana. Amin'ny lafiny iray dia manana tongotra vy tsy misy fangarony izy io izay manitsy ny endriny. Ny vokatra dia azo amboarina amin'ny tinady koa. Afaka manome loko mivaingana rehetra izahay fa tsy fotsy
FAMONJENA SPACE: komparty lehibe sy vatasarihana atsinanana roa, habaka ampy ho an'ny makiazy anao, solomaso, poleta fantsika, lokomena ary kojakoja hafa. Fitaratra fiakanjoana ao anaty kabinetra. Mety ny manaingo-tena anao. Ny fitaratra ao anaty endrika no mitazona azy io ho madio. sy fiarovana
MATERIAL: vita amin'ny hazo MDF, tontonana misy sary hosodoko amin'ny lafiny roa. Ny tongotra dia vita amin'ny hazo soild tena izy, ampy tsara ary miantoka fiantohana ampy ary miantoka fotoana maharitra ampiasaina
Famolavolana Filp Top: Ny famolavolana Flip top dia manampy anao hanokatra sy hanidy mora foana ny toerana fitahirizana.
Ny latabatra fiakanjoan'ny Carter dia manana famaranana lacquer avo lenta. Toerana fitehirizana malala-tanana. Ny fitaratra dia mivalona midina amin'ny tany rehefa tsy takiana.
Toeram-pivarotana maro: Ny fitehirizana miafina dia manolotra toerana malalaka handrakofana sy hikarakarana. Ity latabatra fiakanjoana ity dia azo ampiasaina ho latabatra ho an'ny laptop na birao fandalinana, latabatra fanoratana
Fanorenana mafy orina: Vita amin'ny MDF sy vy vy, manome antoka ny faharetana maharitra sy azo itokisana izy io.
800mmL x400mmW x750mmH
STYLE: Volavola tsara tarehy sy maoderina sy maoderina, fisehoana fotsy mirenty ary fananganana endrika maoderina
MATERIAL: Fitaovana fotsy + volamena: tabilaon'ny potika E1 + vatan-kazo mifono vovoka
Mora ny manangona, fitaovana ary torolàlana tafiditra ao.
Fikarakarana sy fahadiovana: hamafa madio amin'ny lamba lena, hosasana amin'ny lamba madio.
Previous: YF-T14 Flip Top Mirror Drawer Firavaka Kabinetra Fotsy
Manaraka: Akanjo akanjo miloko sy maoderina miloko YF-T16
Latabatra fiakanjo miaraka amin'ny fitaratra sy ny seza
Latabatra miakanjo ambony
Latabatra miakanjo hotely
Latabatra fitafiana fitaratra miaraka amin'ny vatasarihana
Latabatra fiakanjo kely
Tabilao zava-poana YF-S1 Oak Compact
YF-T23 vatasarihana goavam-be Makeup Vanity + kabinetra mijoro amin'ny fahitalavitra
Vanity napetraka amin'ny Touch Screen Mirror
YF-T18 dia manolotra zava-poana ho an'ny velvet amin'ny habakabaka
Zoro YF-T8 feno latabatra fiakanjoana mihaja
Room 508, Avaratr'i Yanzhao Street, Zhengding County, Shijiazhuang, Hebei, Sina